ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Posted on October 29, 2019 October 29, 2019 AuthorMUALeaveacomment
Google မှ ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် မြန်မာယူနီကုဒ်နှင့်သက်ဆိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ Google သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာ ယူနီ ကုဒ်စနစ်အတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုများလည်း အများဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာရိုက်ခြင်းအတွက် ယခင်က အများစု အသုံးပြုခဲ့သော ဇော်ဂျီ font အစား ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး လက်ခံထားသော ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်ဖြစ်သည့် ယူနီကုဒ် font သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်း ကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဦးဆောင်၍ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ Google အနေဖြင့်လည်း ၎င်း၏ထုတ်ကုန် အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးသူများ အဆင်ပြေစေရန်နှင့် Google မှ သတင်းအချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ Read More …
Posted on October 24, 2019 October 30, 2019 Authorthixpin1 Comment
Unicode ကူးပြောင်းအသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေ စေရန် Windows 10 မြန်မာစာလက်ကွက်အသစ်ကို ကွန်ပျူတာတွင် လေ့ကျင့်လိုသူများအတွက် မြန်မာယူနီကုဒ် Typing Tutor ကို အောက်ပါ Link တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ MIT UniTutor https://unitutor.mitcloud.com/ နိုင်ငံတကာသုံး စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ် သို့ တစ်ပြိုင်တည်းကူးပြောင်းရာတွင် နည်းပညာအကူအညီပေးခြင်းကို Myanmar Information Technology (MIT) မှ အင်တိုက်အားတိုက် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည် Source: https://www.facebook.com/MyanmarInformationTechnology/photos/a.160273980702653/2728402500556442/?type=3&theater
Categoriesယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ, ယူနီကုဒ်အကြောင်းအထွေထွေ, သတင်းများTagsMyanmar Unicode, Typing Tutor, Unicode, UniTutor, မြန်မာလက်ကွက်
Deryck Black‎ မှ MSX Converter ကိုဖြန့်ချိ
Posted on October 5, 2019 October 25, 2019 Authorthixpin9 Comments
Microsoft word, excel, powerpoint ဖိုင်တွေကို ဇော်ဂျီ font ကနေ unicode ပြောင်းပေးမယ့် အခမဲ့ windows application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Rabbit Converter ကို အသုံးပြုထားပြီး Python နဲ့ရေးသားထားပါတယ်။ bulk စနစ်ဖြင့် folder လိုက် လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းပေးနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ .docx, .xlsx, .pptx ဖိုင်တွေကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ windows7sp1 နှင့်အထက်၊ C++ Redist Package သွင်းထားဖို့လိုပြီး၊ မရှိသေးပါက အောက်မှာပေးထားတဲ့ link ကနေ သွင်းယူလို့ရပါတယ်။ DOWNLOAD HERE http://bit.ly/2VpAWon VISUAL C++ REDISTRIBUTABLE PACKAGES https://tinyurl.com/msxaddition CHANGELOGS: Read More …
Categoriesယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ, သတင်းများTagsExcel, Office Converter, Powerpoint, Unicode, Word
မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ် ကူးပြောင်းအသုံးပြုခြင်း အခမ်းအနား
Posted on October 1, 2019 October 5, 2019 AuthorthixpinLeaveacomment
မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ် ကူးပြောင်းအသုံးပြုခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့ [ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက် ] နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ ၌ ကျင်းပရာ e-Government ဦးဆောင်ကော်မတီနာယက နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်း၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်၊ ဒေါက်တာဖေမြင့်၊ ဦးမင်းသူ၊ သူရဦးအောင်ကို၊ ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ဦးသန့်စင် မောင်၊ ဦးအုန်းဝင်း၊ ဦးဝင်းခိုင်၊ ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ဦးစိုးဝင်း၊ ဦးဟန်ဇော်၊ ဦးအုန်းမောင်၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးမော်သန်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိမ်း၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ကျော်မောင်၊ Read More …
CategoriesMUA လှုပ်ရှားမှုများ, ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ, သတင်းများTagsMigration, Myanmar Unicode migration, Official launching ceremony of Myanmar Unicode migration, Unicode, ကူးပြောင်းအသုံးပြုခြင်း, မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်
MUA Workshop – September 15 2019
Posted on September 16, 2019 September 18, 2019 AuthorWinston1 Comment
ယ‌နေ့ ၁၅-၉-၂၀၁၉ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် Myanmar Unicode Area က ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပြီး MCF: Myanmar Computer Federation မှ နေရာထိုင်ခင်းအတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးမူဖြင့် Unicode Workshop ကို MICT Park Main Build အခန်း ၂၀၅ တွင် နံနက် ၁၀ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ Workshop တွင် သံဃာတော်များ၊ ဘကြီး အကြီးအရွယ် သက်ကြီးသူများ၊ လူလတ် လူငယ် မိသားစုများနှင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကူးပြောင်းလိုသူများ အယောက် ၅၀ ခန့် ၏ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲလိုသောဖုန်းများ ကွန်ပျူတာများကို ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲပေးခြင်း၊ အခက်အခဲများကို ရှင်းပြ ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ Read More …
CategoriesMUA လှုပ်ရှားမှုများ, ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ, သတင်းများTagshelp, MUA, myanmarunicode, Unicode
MNLP ကထုတ်တဲ့ကွန်ဗာတာ နဲ့လဲ word နဲ့ excel ကိုယူနီကုဒ်ပြောင်းလို့ရပေမယ် file size ကြီးရင် ပြောင်းမပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာရှိပါတယ် အခုနည်းလေးကတော့ နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ပေမယ့် အဆင်ပြေပြေ ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဗျ နည်းလမ်းလေးကတော့လွယ်ပါတယ် အရင်ဆုံး ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ word, excel or power point file ရဲ့ format ကို rename နဲ့ .zip format ကိုပြောင်းပါ ( file format ဆိုတာက word ဆိုရင် .doc or .docx နဲ့ဆုံးပါတယ် အဲ့လိုတွေမမြင်ရရင် folder potion ထဲမှာသွားဖွင့်ပါ ) ပြီးရင် winrar သုံးပြီး extract လုပ်လိုက်ပါ ကိုယ်ပေးထားတဲ့ file Read More …
Myanmar Unicode Converter (V 2.0) for Windows
Posted on September 1, 2019 September 2, 2019 Authorမျိုးကျော်ဇင်သန့်19 Comments
Myanmar NLP team ကထုတ်ပေးထားတဲ့ windows တွေအတွက် Unicode Converter (2.0) ပါ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ 1. Academy- Family 2. Amyanmar 3. A_Type Writer 4. Ava-Forever 5.Ayar-Family 6. CE-Family 7. Gandamar-Family 8. I <<< (ဘာဖောင့်လဲတော့မသိ သူ့ထဲမှာပါလို့) 9. M-Myanmar-Family 10. Metrix-Family 11. Myanmar1 12. Myazedi 13. Pinny- Family 14. Win-Family 15. Zawgyi အဲ့ဒီ font နဲ့ရေးထားတာတွေကို ယူနီကုဒ်အဖြစ် ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် ဒါအပြင် အပေါ်မှာပြထားတဲ့ fonts ၁၅ Read More …
MCF released tool to help Zawgyi users with their move to Myanmar Unicode (MCF MUX SMS/Converter tool)
Posted on August 29, 2019 October 25, 2019 AuthorWinston7 Comments
Connect MUX/ MCF MUX မက်ဆေ့များ ဖောင့် မမှန်မှုကြောင့် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရမှုကို ပြေလည်စေခြင်း ၊ ဇော်ဂျီ ၊ ယူနီကုဒ် နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ပေးပို့နိုင်ခြင်း ၊ စာပိုဒ် စာသား များကို ဇော်ဂျီ မှ ယူနီကုဒ် (သို့မဟုတ်) ယူနီကုဒ် မှ ဇော်ဂျီ သို့ ပြောင်းလဲပေးခြင်း ၊ ဖုန်းတွင် မှတ်ထားသော Contact များ၊ ဖိုင် နာမည်များကို ဖုန်း၏ System ဖောင့် အတိုင်း အလိုအလျောက် ပြောင်းပေးနိုင်သည့် Android Version အနိမ့် များတွင်ပါသုံးနိုင်သော App ဖြစ်ပါသည်။ [ဒီနေရာက ရယူလိုက်ပါ MCF MUX]
Categoriesယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ, သတင်းများTagsconnectmux, mcf